Idi Ụlọ ọrụ China Wear Resistant Track Pads ụlọ ọrụ na ndị na-ebubata ya |Arex
Emebere pad anyị niile na ndị ọrụ njedebe n'uche anyị, na-elekwasị anya na ịdịmma na nrụpụta.Profaịlụ pads kwesịrị dabara nke ọma akpụkpọ ụkwụ egwu gị ka ọ ghara igbochi mmegharị ahụ na-adịghị mkpa nke nwere ike ibute mkpọkọ irighiri ihe, nke nwere ike iwebata nrụgide na pads gị si otú ahụ na-enye ogologo ndụ ka mma.Nkwado zuru oke pụtakwara mkpọtụ na-arụ ọrụ dị jụụ.Anyị na-enye paịlị polyurethane na eriri rọba maka ndị ahịa na-eji, nke nwere nnukwu ihe na-eguzogide ọgwụ na corrosion n'oge ọnọdụ ọrụ.Anyị na-enye rọba dị iche iche na polyurethane track pad ụdị dabara gị chọrọ.
Biko rịọ maka eserese injinia iji hụ na ị na-ahọrọ pad ziri ezi.N'aka nke ọzọ, ị nwekwara ike dejupụta fọm ajụjụ ka ndị ọrụ anyị nwee ike inyere gị aka ịchọta nke kacha mma.
Ụdị nke mpe mpe akwa
Ihe mgbochi rọba
Nhazi paịlị egwu egwu nwere bolts 2 ma ọ bụ 4 na ala.Ọ bụ ụzọ kacha sie ike na nchekwa maka igbachi pad na akpụkpọ ụkwụ egwu gị.Kwesịrị ekwesị maka akpụkpọ ụkwụ egwu niile nwere oghere.
Bolt na nko
Ụdị nke dabara adaba nwere nkwado ma ọ bụ nko dị n'otu akụkụ, yana bolts na nsọtụ nke ọzọ.Emebere ya iji kwalite oge dabara adaba ka ọ na-ejigide ike nke nrụnye.Anyị enwetala nzaghachi nke ndị ahịa na-ebelata oge mgbatị ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50%.
Ụdị nrụnye a nwere ihe nkwado ma ọ bụ nko dị n'otu akụkụ, yana clip dabara adaba nke ọma na nsọtụ nke ọzọ.Ụdị mma a bara uru karịsịa maka ụgbọ ala nwere akpụkpọ ụkwụ egwu na-enweghị oghere.N'ịbụ onye kwadoro maka ntinye ya dị mfe, enwere ike ịhọrọ ya maka akpụkpọ ụkwụ egwu nke nwere oghere bolt.
Mpempe eriri (nke a makwaara dị ka liner road liner) bụ ihe ngbanwe modular na-eji egwu rọba niile, nke na-enye uru agbakwunyere na-enyere onye ọrụ njedebe aka iji dochie paịlị mebiri emebi n'otu n'otu.A na-eji elastomeric geometry mebere isi nchara dị n'ime ya nke na-enye pad na-enweghị nguzogide abrasion na ịdịte aka.
Nke gara aga: Njikọ Mgbasa roba
Osote: Nbufe eriri & Rollers
Hose ọkwa nri
© Nwebiisinka 20102021: Ikike niile echekwabara.> Ntupu ihuenyo Njikọ Mgbasa Ọla Valve Control Pneumatic Njikọ Mgbasawanye Seismic Valve mmanụ ihe mmịfe 50mm roba hose naagbanwe agbanwe Ngwaahịa niile